Fiangonana Loterana - Sinôdan' i Missouri - Wikipedia
Fiangonana Loterana - Sinôdan' i Missouri
(tonga teto avy amin'ny Fiangonana Loterana - Sinodan'i Missouri)
Ny Fiangonana Loterana - Sinôdan'i Missouri dia fiangonana prôtestanta fahavalo lehibe indrindra ao Etazonia. Izy koa no fiangonana loterana faharoa lehibe indrindra ao Etazonia aorian' ny Fiangonana Loterana Evanjelika ao Amerika. Amin' ny teny anglisy izy dia atao hoe Lutheran Church–Missouri Synod (LCMS). Ny Sinôda Loterana Evanjelika ao Winsconsin na Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS) no ao aoriany.
Tamin' ny taona 1847 no niorenany. Ao Saint Louis ao amin' ny Fanjakan' i Missouri no misy ny foibeny sady misy mpino vita batisa miisa 2 300 000 sy paroasy miisa 6 100 ary pastora miisa 9 000. Any amin' ny faritra andrefana ao Etazonia no tena ahitana azy, indrindra ao amin' ireo taranaka alemàna ao Etazonia.
Tsy dia betsaka izy any amin' ny faritany kanadianan' i Ontario, nefa mpiara-miasa any Kanada izy, dia amin' ny Fiangonana Loterana Evanjelika Kanada. Miely any Frantsa koa izy amin' ny alalan' ny Fiangonana Evanjelika Loterana Sinôdan' i Frantsa (izay tsy mifandray amin' ny Fiangonana Loterana Evanjelika Loterana ao Frantsa). Avy amin' ny fifohazam-panahy loterana tao Alsace tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-19. Manana paroasy sivy izy ka ny dimy any Alsace, ny teo any amin' ny faritra manodidina an' i Paris ary ny iray any Poitou.
Fiangonana Loterana Evanjelika ao Amerika
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_Loterana_-_Sinôdan%27_i_Missouri&oldid=1012857"
Voaova farany tamin'ny 20 Jolay 2021 amin'ny 08:51 ity pejy ity.